Akaiky vahoaka, lavitra ny fony | NewsMada
Akaiky vahoaka, lavitra ny fony
Miparitaka any anaty tambajotran-tsosialy ny sary maromaron’ireo kandidà hirotsa-kofidina. Te hampiseho fa manatona vahoaka amin’ny fisotroana kafe na dite, manao mofogasy, sns. Dia variana ny rehetra fa nipoitra avy any anaty trano sy fiara raitra izy ireo, maka ny fon’ny mpifidy, te haneho fa akaiky azy ireo.
Tsy vao izao ny nahitana izany fomba fanaon’ny mpanao politika izany. Hita tanatin’ireny tambajotran-tsosialy ireny ny zava-nitranga tany India, nandeha an-tongotra nihosona niaraka tamin’ny besinimaro teny amin’ny arabe ny solombavambahoaka maromaro, handresy lahatra ny mpifidy, hifidy azy ireo fanindroany indray. Kanjo, nahazo tabataba, fimenomenonana ary nahazo vono sy daka mihitsy aza ny sasany tamin’ireo depiote tsy nijery vahoaka ireo nandritra ny fotoam-piasany. Soa fa tsy nisy an’izany eto amintsika, saingy mahafantatra ny mpifidy fa rehefa antomotra ny fifidianana toy izao, vao mahay midina eny ifotony ireny mpilatsa- kofidina ireny. Tambatambazana amin’ny vola kely sy akanjo t-shirt ary ampijerena rindrankira maimaimpoana.
Tsy nisy sahy nilaza (hatreto) fa hampidina ny vidin-tsolika, ny saran-dalan’ny taxi-be, ny fidangan’ny vidim-piainana, hamorona asa, hanao lalana, hanorina trano ho an’ny mahantra sy ny saranga antonony, sns. Tsy nisy sahy satria efa nanao toy izany avokoa ny teo aloha ary tsy nahavita. Ny an’ilay iray izay, nanome telo volana hanafoanana ny delestazy manerana ny Nosy, saingy telo na dimy taona taty aoriana, tsy voavaha ihany.
Na tsy miteny sy tsy manana fahefana aza ny maro an’isa, misy tadidiny kely ihany ny toky hakamorana tsy vitan’ny mpitondra sy ny mpanao politika ary hafarany ho an’ny taranany any aoriana.